Apple waxay soo bandhigtay muraayadaheeda dhabta ah ee la kordhiyey guddiga maamulka | IPhone News
Angel Gonzalez | 21/05/2022 10:00 | Noticias, Alaabada Apple
weyn cadadka macluumaadka maalmahan soo ifbaxaya waa mid aad u culus. Gaar ahaan iyada oo la tixgelinayo in laba toddobaad gudahood WWDC22 ay bilaaban doonto, dhacdada ugu muhiimsan ee horumarinta Apple ee sanadka. Nidaamyada hawlgalinta ayaa inta badan lagu dhawaaqaa dhacdadan. Marar aad u yar Tim Cook iyo kooxdiisu waxay go'aansadeen inay alaabta ku soo bandhigaan furaha furaha. Si kastaba ha ahaatee qaar badan ayaa aaminsan XaqiiqdaOS, nidaamka hawlgalka ee muraayadaha dhabta ah ee la kordhiyay ee Apple, ayaa ka muuqan lahaa shirka. Dhab ahaan, Naqshadda kama dambaysta ah ee muraayadaha dhabta ah ee la kordhiyay ee la suuq gayn doono 2023 ayaa mar horeba loo soo bandhigay golaha maamulka.
Muraayadaha dhabta ah ee Apple ee la kordhiyay ayaa la iibin doonaa 2023
Muraayadaha dhabta ah ee la kordhiyey waxay ku jireen bushimaha falanqeeyayaasha muddo dheer. Si kastaba ha ahaatee, hadda waxay u muuqataa inay tahay wakhtiga saxda ah, wakhtiga marka aan ugu dambeyntii ogaan doono waxa naqshadiisa ugu dambeysa ay u ekaan doonto. Jiilkan kowaad ayaa la filayaa waa qalab aad u weyn oo qiimihiisu ka badan yahay 1000 euro, oo ay heli karaan taageerayaasha iyo horumariyeyaasha gaarka ah. Heerka qalabka, waxay qaadi doontaa shaashado heer sare ah, jajab xoog leh, iyo dareemayaal horumarsan, taas oo, qayb ahaan, ka dhigi doonta qiimaha qaaliga ah. Laakin yaynaan lumin aragtida gunta hoose: Apple waxa ay doonaysaa in ay abuurto muraayado xaqiiqo ah oo yar oo la kordhiyey.
Apple wuxuu bilaabi karaa muraayadaha indhaha ee xaqiiqda ah ee la kordhiyay sanadka 2030
Sida laga soo xigtay Mark Gurman, madaxda Apple Waxay horey u soo bandhigeen mashruuca ugu dambeeya ee muraayadaha Apple ee guddiga maamulka. Bandhigan waxa la sameeyaa marka alaabtu leedahay wax soo saarkeeda iyo ganacsigeeda dhaw. Dhab ahaantii, waxaan ka danbeynay xanta ku saabsan muraayadaha dhabta ah ee la kordhiyay sanado badan tani waxay noqon kartaa bilawga dhabta ah ee alaabta Apple. Sida muuqata Tufaaxa weyn ayaa saadaaliyay ganacsigiisa 2023.
Taas macnaheedu waa in soo bandhigid weyn oo alaabta ah ayaa lagama maarmaan ah sida Steve Jobs uu soo bandhigay iPhone-ka xilligaas. Waxay yihiin alaabooyin ku daraya caannimada astaanta, oo dhan ka sarreeya, waxay dejin karaan horudhac gudaha iyo dibadda ah. Sidaan kuu sheegayey, WWDC waxay diiradda saartaa kaliya nidaamyada hawlgalka laakiin kama saari karno a hal wax ka badan meesha aan ku aragno a dib u eegida RealityOS iyo muraayadaha dhabta ah ee Apple ee la kordhiyay.
Wadada buuxda ee maqaalka: Wararka IPhone » Alaabada Apple » Apple waxay soo bandhigtaa muraayadaha dhabta ah ee la kordhiyey ee guddiga maamulka